Yenzani ntoni iKliniki yezoMthetho?
Home MAYELA NATHI Yenzani ntoni iKliniki yezoMthetho?
Inkqubo yezomthetho yaseMzantsi Africa inokusebenza kuphela ukuba iyafikeleleka yaye iyathembakala emehlweni abantu abaqhelekileyo. IKliniki yezoMthetho imi kwindawo entle ukuze yandise ufikelelo kwezobulungisa kwabangathath ntweni nabavalalwe amathuba.
IKliniki yezoMthetho ese-18-24 Crozier Street, eStellenbosch, isebenza njenge-ofisi yamagqwetha epheleleyo, enikela ngeenkonzo zomthetho kubantu abangathathi-ntweni nabavalelwe amathuba ngoxa kwangaxeshanye iqeqesha abafundi bezomthetho abakunyaka wokugqibela namagqwetha asafundayo eqhelisela umthetho. Amagqwetha namagqwetha asafundayo abonakala kumaqonga awahlukeneyo ezomthetho eBholani. Le Kliniki ikwalondoloza ukubopheleleka kwezomthetho iqhuba iiwekshophu ngokukhutshwa kwindawo ohlala kuyo, isiqabu kumatyala nogonyamelo entsatsheni.
Kanti le kliniki ikwanikela iinkxaso kwiinkonzo zomthetho kwii-ofisi eziseSeresee, Stellenbosch, eSomerset West naseVostile. Abantu abangathathi ntweni nabavalelwe amathuba bancedwa ngabasebenzi bale kliniki yomthetho ngemiba eyahlukeneyo yomthetho njengokukhutshwa kwiindawo abahlala kuzo, imiba yoqhawulo-mtshato, umthetho wentsapho nesiqabu kwityala, nezinye. Le Kliniki yezoMthetho ijongene ngokukhethekileyo nokukhutshwa kwabantu ezifama, nto leyo ngoku ingomnye umba obaluleke kakhulu kummandla waseBholani. Ukukhutshwa kwabantu kwiindawo abahlala kuzo okubangela ukuba bangabi namakhaya kusisisongelo sokwenene kumalungelo abasebenzi basezifama nabantwana babo yaye baba ziindwayinge ezingenathemba lokufumana amakhaya nokukhusela iintsapho zabo.